एलोन मस्कले कस्तो इन्टरनेट ल्याएका थिए, जसलाई भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगायाे ! - fairnepal.net
एलोन मस्कले कस्तो इन्टरनेट ल्याएका थिए, जसलाई भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगायाे !
एजेन्सी । दुई दिनअघि भारत सरकारले अमेरिकी अर्बपति व्यापारी एलोन मस्कको इन्टरनेट कम्पनी ‘स्टारलिङ्क’को सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘स्टारलिङ्क’ मस्कको कम्पनी ‘स्पेस एक्स’ को एकाइ हो, जसले ‘लो अर्थ अर्बिट’ स्याटेलाइटमार्फत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार, केन्द्र सरकारले शुक्रबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्टारलिङ्कलाई “तत्काल प्रभावबाट इन्टरनेट सेवाहरू बुक गर्न र भारतमा सेवाहरू प्रदान गर्नबाट” रोकेको जनाएको छ।
यसअघि भारतको स्टारलिङ्क कम्पनीका कन्ट्री डाइरेक्टर सञ्जय भार्गवले हालै सामाजिक सञ्जालमा देशमा यो सेवा प्रयोग गर्न चाहने ५ हजारभन्दा बढीले अग्रिम बुकिङ गरेको बताएका थिए । उनका अनुसार उनको कम्पनी भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउन काम गर्न चाहन्छ ।
स्टारलिङ्कले डिसेम्बर २०२२ सम्ममा २ लाख डिस टर्मिनलहरूमार्फत भारतमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। स्पेसएक्सले विश्वभर स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि हालसम्म १,७०० स्याटेलाइटहरू अन्तरिक्षमा स्थापना गरिसकेको छ। तर, त्यस्ता लाखौं उपग्रहहरू अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्ने उनको योजना छ ।
आखिर सरकारले किन रोक्यो ‘स्टारलिङ्क’ ?
कम्पनीले हालसम्म देशमा यस्तो सेवा दिने इजाजतपत्र नपाएका कारण भारत सरकारले स्टारलिङ्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट सुविधाको अफर रोकेको हाे । लाइसेन्स बिना देशमा उपग्रह आधारित सेवा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
तर कम्पनीले लाइसेन्स नलिई आफ्नो सेवा बुकिङ र सेवासँग सम्बन्धित विज्ञापन प्रसारण गर्न थालेको छ । यही प्रभावका कारण धेरैले बुकिङ गर्न थालेका छन् । कन्ट्री हेडले आफूसँग हजारौंले बुकिङ गरेको पनि दाबी गरेका छन् ।
केन्द्रीय सरकारको दूरसञ्चार विभागले पनि आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ कि स्टारलिंक वेबसाइटबाट यो स्पष्ट छ कि भारतका प्रयोगकर्ताहरूले त्यहाँ गएर स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाहरू बुक गर्न सक्छन्।
यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकार अगाडि आएर अवस्थाको यथार्थ बताई कम्पनीको विज्ञापन र बुकिङमा रोक लगाउन बाध्य भएकाे भारतीउ सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
केन्द्र सरकारको दूरसञ्चार विभागले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्टारलिङ्कले भारतमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाहरू प्रदान गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेको छैन। इलोन मस्कको कम्पनीले देशमा आवश्यक लाइसेन्स बिना प्रवर्द्धन गरिरहेको सेवाहरूको सदस्यता लिन सर्वसाधारणलाई सल्लाह दिइन्छ।
सरकारले कम्पनीलाई नियम पालना गरी आवश्यक लाइसेन्स लिने प्रक्रिया पूरा गर्न भनेको छ । कम्पनीले यही महिनाको पहिलो दिन भारतमा दर्ता गरिसकेको भए पनि त्यसो गर्दा मात्र पुग्दैन ।
दूरसंचार विभागले स्टारलिङ्कलाई आवश्यक नियामक ढाँचाको पालना गर्न र “तत्काल प्रभावको साथ” भारतमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाहरू बुक गर्नबाट जोगिन पनि निर्देशन दिएको छ।
‘लो अर्थ अर्बिट स्याटेलाइट इन्टरनेट’ सेवा के हो?
कम्पनीले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन ‘लो अर्थ अर्बिट’ स्याटेलाइट प्रयोग गर्छ । यी उपग्रहहरू पृथ्वीबाट करिब ५५० किलोमिटरको उचाइमा तीव्र गतिमा घुम्छन् र ९० मिनेटमा पृथ्वीको परिक्रमा गर्छन्। यस प्रणालीमा, उपभोक्ताहरूसँग एउटा सानो डिश एन्टेना हुन्छ, जसले उपग्रहबाट पठाइएको सङ्केत लिन्छ।
यस प्रविधिको विशेषता भनेको यसको सेवा अन्तिम उपभोक्ताका लागि नदेखिने अवस्थामा उपलब्ध हुनेछ । यसको मतलब फाइबर नभएको ठाउँमा पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्याटेलाइट लिंकमार्फत जनतालाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ । अहिले यो प्रविधि ‘बिटा टेस्टिङ’ अर्थात् धेरैजसो ठाउँमा प्रारम्भिक परीक्षण हुँदैछ।
हाल यो सेवा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले आफूले प्राप्त गरिरहेको डाटाको डाउनलोड स्पीड १५०-२०० एमबीपीएस र अपलोड स्पिड १०-२० एमबीपीएस रहेको बताउँछन्। जे होस्, फेब्रुअरी २०२१ मा, एलोन मस्कले ट्वीट गरेका थिए कि स्टारलिंकले यसको टप स्पीड दोब्बर गरी ३०० एमबीपीएसमा पुर्‍याउनेछ।
स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन चाहने विश्वका केही कम्पनीहरूमध्ये स्टारलिङ्क एक हो। यस बाहेक, धेरै कम्पनीहरू र सरकारहरू यस क्षेत्रमा आफ्नो भाग्य प्रयास गर्न खोजिरहेका छन्। तीमध्ये अमेजन, क्यानडाको टेलिस्याट, वनवेब र युरोपियन युनियन र चीन जस्ता कम्पनीहरू प्रमुख छन्।
भारतको बारेमा कुरा गर्दा, यहाँ स्टारलिंकले रिलायन्स जियो, भारती एयरटेल, भोडाफोन आइडिया जस्ता टेलिकम कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
यसले स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाको सन्दर्भमा भारती समूहको संयुक्त लगानी वनवेबसँग सीधा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। OneWeb एयरबस, भारती इन्टरप्राइजेज र ब्रिटिश टेलिकम बीचको संयुक्त उद्यम हो।
अमेजनले ‘प्रोजेक्ट कुइपर’ अन्तर्गत ३,२३६ उपग्रहहरू अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाएको छ। योसँगै क्यानडाको टेलिस्याट कम्पनीले २९८ उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना बनाएको छ । युरोपियन युनियनले पनि ठूलो संख्यामा उपग्रहहरू अन्तरिक्षमा पठाउने योजना बनाएको छ। यसका लागि चीनले धेरै योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
खैर, ‘वनवेब’ को उपग्रहहरू पहिले नै अन्तरिक्षमा अवस्थित छन्। हालसम्म यसको अन्तरिक्षमा जम्मा २८८ उपग्रह स्थापना भइसकेको छ । OneWeb को फोकस सरकारहरू, व्यवसायहरू साथै समुद्री सेवाहरूमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउनु हो।
ब्रिटिश टेलिकमसँगको सम्झौताको अर्थ कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उपभोक्ता ब्रोडब्यान्ड आपूर्ति गर्ने सम्भावना छ। यसमा पोर्टेबल ‘5G सेलहरू’ पनि समावेश छन्, जसलाई ग्राहकहरूले आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सक्छन्। दुर्गम क्षेत्रका मानिसले पनि अब स्याटेलाइटमार्फत ब्रोडब्यान्ड सेवा लिन सक्नेछन् ।
स्याटेलाइट इन्टरनेटको गुणस्तर कस्तो होला ?
स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले कति राम्रो सेवा पाउँछन्, यो धेरै कारकहरूमा भर पर्छ।
पहिलो हो कि कतिवटा डिस वरिपरि हुनेछन्। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले एक पटकमा एक क्षेत्रमा उच्च गति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कुनै पनि क्षेत्रमा उच्च गति प्रदान गर्ने प्रणालीको क्षमता सीमित भएकोले वरपरका प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढ्दै जाँदा औसत बिट-दर घट्नेछ। यद्यपि, स्टारलिङ्कले हाल प्रति कभरेज क्षेत्रमा सदस्यहरूको संख्या सीमित गर्दछ।
यसैबीच, यसको नियामक निकाय ‘अफकम’ले भर्खरै स्याटेलाइट प्रणालीमा बढ्दो हस्तक्षेपको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ, जुन ड्रपआउटको सम्भावित कारण हुन सक्छ।
विज्ञहरूको रायमा, एक ढिलो तर भरपर्दो इन्टरनेट जडान छिटो तर बीचमा इन्टरनेट जडान भन्दा धेरै राम्रो छ। अन्तरक्रियात्मक अनुप्रयोगहरू (जस्तै भिडियो कन्फरेन्सिङ) लाई निरन्तर जडान चाहिन्छ।”
माथवरसिंह थापा जसलाई आफ्नै भाञ्जाले गोली ठोकेर मारे
इलोन मस्कले यसवर्ष ११ अर्ब अमेरिकी डलर कर तिर्ने
घण्टौँसम्म इन्टरनेट गेममा झुम्मिने बालबालिकाका कारण…
सीजीले सुरु गर्‍यो नेपालकै सस्ताे मूल्य इन्टरनेट सेवा
४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लाष्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध…
७७ जनाकाे ज्यान बचाएकाे भन्दै वाहवाही पाएका पाइलट…
Previous Previous post: सौभाग्‍यको संकेत मानिन्छ यी चिज, के तपाईलाई थाहा छ यी अनौठा विश्वास ?
Next Next post: जब, साइकल चढेर बच्चा जन्माउन अस्पताल गइन् न्यूजील्यान्डकी सांसद ……